Zato andro na telo volana be izao Raha any ampianarana efa nahavita programa be tokoa Tsara ihany ny mampatsiahy an'izany ho ahy sy ho anao Fa ny fotoana tsy voavidim-bola ary tsy manam-paharoa. Aza hiandrasana rahampitso izay mety ho vit
Mody adala indray ee !
Mahita tenenina foana ianareo ity ry Jean ka ! Izay sipa nokaotinareo tamin’ny fahatanoranareo angamba tonga dia iray andro daholo dia zaka.
Taratasin’i Jean Efa hoe fanohanana !!
O ry Jean a ! Ianareo ve tena minia tsy mahazo an’ilay fanentanana sa efa mahafaly anareo mihitsy ilay manakiana lava e ? Ilay izy efa hoe fanohanana no atao fa tsy misy idiran’ny resaka manana sy tsy manana.
Taratasin’i Jean Ady mitsatsaka
Tena hita mihitsy ianareo ry Jean fa mbola boay kely a ! Izay dia manao ady mitsatsaka fotsiny nefa nilokaloka ery tary aloha tary hoe lalao madio no hiarahanay amin’i Papa.
Taratasin’i Jean Fahasahiana ity anao ity ry Jean a !
Miarahaba anao indray aho ry Jean ! Midera ny fahasahianao mihitsy aho rangahy marina a !
Taratasin’i Jean Matahotra inona ?
Fahasalamanao indray ry Jean ? Inona no malaza any aminao any ?
Ho aiza indray ianareo ?
Manao ahoana i Jean ! Ho aiza indray ianareo ? Tena nahita deba lava tongotra aho rangahy fa ianareo no tena nampiaiky ahy indrindra a !
Vanin'andro ririnina, hatsiaka mamirifiry Ny lamba fitafy anefa tsy mba misy firy Ary ny tena loza sy mampalahelo tokoa Dia mbola may hatramin'ny trano fonenana koa.
100 androMahaiza tsara mandamina izay tokony hefaina Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra ny saina.
Raha firenena no tantanina tena saro-pady
Tsy vitan'ny taitaitra ireo adidy izay miandry
Ny laharam-pahamehana tsy azo atao ambanin-javatra
Ny tena maika aloha atao fa sao dia lasa miangatra.
Ny Malagasy mbola miandrandra foana hatrany
Masoandro vaovao hiposaka tsy ho ritra tsy ho lany
Ampy izay ny tafiotra zary nankarary antsika mianakavy
Ka mba jereo re ry fitondrana ireo vahoaka fa manavy.